Freemasons အတူတူ, လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒကို run ။
ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများကိုဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်ရိုကိုတွင်ဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိဘဲပြုမူခဲ့သည်။ မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းအောက်မေ့ရာပွဲကိုဖျက်ဆီးသည့်အခါ Mason သင်္ကေတများကို Moroccan စစ်တပ်မှဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြယ်သခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးအလွန်အရေးကြီးသောနိမိတ်လက္ခဏာကို။
Pro7 လီလီယို: pixel ကူညီတည်ထောင်သူမှာ Oliver Bienkowski အတူ Mason အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အဖွဲ့များကြားတွင်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အကျိုးပြုခြင်းအားဖြင့် Freemasons များသည်လူသား၏စံနမူနာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားသည်။ Freemasons များသည် Illuminati မဟုတ်ပါ၊ New World Order နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများကိုမယုံပါ။ Freemasons များသည်ထိုအရာနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ အမျိုးသမီးများသေတ္တာများကို ၁၉၃၅ ခုနှစ်ကတည်းကတရားဝင်ရှိခဲ့သည်။ ၁၈ ရာစုရှိအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ဆောင်လိုသည့်ဆန္ဒကိုဤအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောဤကာလမှပြဇာတ်တစ်ခုလုံးမှပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသော်လည်းအနည်းဆုံးတော့ Freemason Mozart မှ Magic Flute ဖြစ်သည်။ Freemasons သည်သည်းခံနိုင်ပြီးဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ရပ်တည်သည်။
တစ်ဦးနှင့်အတူ ဖောင်ဒေးရှင်းပုံစံ ငါတို့အာမခံပါတယ် အရေးကြီးသောအလုပ် အတွက် လူ့အခွင့်အရေးကို & နောက်ထပ် လူသား ဒါ့အပြင်အကြောင်း နောက်မျိုးဆက်များ ဝေး ဘယ်အချိန်မှာ pixel ကူညီ Foundation မှအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော GmbH သည် ကံဇာတာသည်Mason ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့"(FHW) ။ သူကတစ်ခုပါ ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်း အ freemason ဂျာမနီမှာ။ The Mason အဖွဲ့ဝင်များ pixel ကူညီ ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ Times အ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကိုယ့်ကိုကိုယ် မတရားမှုတွေကိုပြသတဲ့နေရာတိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွတိုက်ခိုက်တယ်။ ကတည်းက ရာစုနှစ်များစွာ ပါ ၀ င်ပါ freemason အပေါ်ကောင်းသောအဘို့ Welt နှင့်သင်၏မှတဆင့်ကြိုးစားပါ အက်ဥပဒေ anderen စံပြစံနမူနာ ဖြစ်ရန် The freemason သည်အထိလည်ပတ် 1980 မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဆေးရုံ in ဟမ်းဘတ် ဆဲယနေ့လည်ပတ် အငြိမ်းစားအိမ် der အတွက် Hanseatic မြို့.
PixelHELPER သည်လူနည်းစုများနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများအတွက်အကျိုးအမြတ်မယူသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး Freemasons ၏စံနမူနာများမှလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေန်းကျင်စိတ်တွင်မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, အန္တရာယ်အကြောက်ကင်း, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ, လမ်းလျှောက်ကမ္ဘာကြီး၏ဆူညံသံများကဒါပေမဲ့တွေဝေ။ အခြေခံခံယူချက်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံမူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ "Liberty, တန်းတူရေး, အဖွဲ့များကြားတွင်" နိုင်ငံရေးလစျြလြူရှု၏အထပ်ထပ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါလိုအပ်သည်။ ဆောင်ပုဒ်အမှန် - "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါ" အဖွဲ့ဝင်များသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူသားမျိုးနွယ်စုများကိုအတူတကွစုစည်းရန်ကြိုးစားကြသည်။
ဂျာမန် Freemason သတင်းစာ "Humanität" မှကောက်နုတ်ချက်။
PixelHELPER ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အနုပညာရှင် & Freemason Oliver Bienkowski ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၇၀ ကျော်နှင့်အခြား Freemasons ၆ ခုတို့ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Freemasonry ဆိုသည်မှာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်သောမဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အသိုင်းအဝိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်ဥရောပဉာဏ်အလင်းပွင့်၏အစဉ်အလာမှပေါ်ထွက်လာသည့်သင်္ကေတလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမဟာမိတ်များဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သည်းခံမှုကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အသင်း ၀ င်များ၏အတွေးအခေါ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်စံနှုန်းများကိုတန်ဖိုးထားသည်။
Freemason ဆေးရုံသည် ၁၇၉၅၊ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် Dammtorwall ၌ဖျားနာသူများကိုလက်ခံသည့်ပထမဆုံးဌာနအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အထိဟမ်ဘာ့ဂ်၌လုံးဝချို့တဲ့နေသည်။ ၎င်းကိုအမျိုးသမီးအစေခံများအတွက်ဆေးရုံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အမျိုးသားအစေခံများထားရှိရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဆူးပင်သုံးကောင်အတွက်ညီအစ်ကိုများဗွန်အာဆင်အဗရှလုံ၏အကူအညီဖြင့် Friedrich Ludwig Schröderကအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ Bedtmann ဒေါက်တာ Ferdinande Caroline ကိုကြယ်သုံးပွင့်နှင့်စိမ်းလန်းသောအပင်သို့ကြိုးများစိန့်ဂျော့ဂ်ျသို့ပို့ပါ။
ယူနိုက်တက်ဟမ်ဘာ့ဂ်တွင်တည်းခိုခဲ့သည့်နေရာ (ဆူးပင် ၃ ခုနှင့်အဗရှလုံ၊ စိမ်းလန်းသောအပင်သို့စိန့်ဂျော့ဂ်၊ ကြယ်သုံးပွင့်မှဖာဒီနန်ကယ်ရယ်လင်း) ။ ၁၇၉၉ တွင်ဖာဒီနန် zum Felsen နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ United4Hamburg Lodges ၏စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့သည် ယခုနှစ်မှစ၍ တည်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသည် 'Treasury and Alms Comité der Ver' ၏လက်အောက်တွင်ရှိသည်။3သေတ္တာများ။ ဤကော်မတီသည်၎င်း၏ဥက္ကBre္ဌဘီဒီ (ကြယ်သုံးပွင့်မှဖာဒီနန်ကယ်ရိုလိုင်း) လက်အောက်တွင် ၁၈၈၃ ခုနှစ်တွင်ဆေးရုံသစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၈၈၅၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်တွင်ကလိန်းနန်ရှာဖာကမ်ပ်ရှိအိမ်သစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ လုပ်နိုင်
Freemasons အကြောင်းကို quote
သူတို့သည်လည်း Freemasons ကိုယ်စားပြုနေကြသည်အဖြစ် "ငါသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်စံမျှော်လင့်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းပိုပြီးလူ့ဖြစ်လာနိုင်အောင်ယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့သညျ ", ပိုမိုသည်းခံစိတ်နဲ့လူသားတစ်ဦးစိတ်ကိုလိုအပ်တယ်
ကပြောပါတယ် Ignatz Bubi
Freemasonry ယောက်ျား၏သဘောသဘာဝနှင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသောမတရားဘယ်အရာကိုမျှမသာသနာဘာမျှမ, ဒါပေမယ့်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုသည်။
Mason အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအသင်း ၀ င်များအားစစ်မှန်သောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပညာပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်နည်းလမ်းများမှာအလယ်ခေတ်ဆောက်လုပ်ရေးတဲများမှယူဆောင်လာသည့်သင်္ကေတဓလေ့ထုံးစံများ၊ လူသားတို့အတွက်အရေးကြီးသောအရေးကိစ္စများအတွက်အပြန်အလှန်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စံပြစံနှုန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ညီရင်းအစ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်ဤနိယာမများကိုအိမ်ပြင်ပ၌ဖြန့်ဝေသင့်သည်၊ အသိပညာကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်များနှင့်သည်းမခံမှုကိုတန်ပြန်သင့်သည်။ တည်းခိုခန်းတွင်အသင်း ၀ င်များသည်သင်္ကေတများနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုတွေ့ကြုံခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပညာပေးရန်အားပေးသည်။
အဆိုပါ GDR အတွက် Freemasons
ORF: အ Freemasons အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
pixel ကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ | TEDx, မော်ရိုကို Marrakech မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု Liveapp ၏တင်ဆက်မှု
Mason အလင်းတပ်ဆင်ခဂျီသြမေတြီ, Dusseldorf ဂျာမဏီ
Rainbow လေဆာတပ်ဆင်ခြင်း“ From the Rainbow”, Düsseldorf Germany
pixels ကိုကူညီတည်ထောင်သူ Otmar Alt နှင့်တွေ့ဆုံ
pixel ကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ | အကျော်ကြားဆုံး Freemasons ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်များ Otmar Alt တဦးတည်းနှင့်အတူ pixel ကူညီတည်ထောင်သူမှာ Oliver Bienkowski ၏အစည်းအဝေး
pixel ကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ | Bayreuth အတွက် Mason ပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှု
အဆိုပါ Mason ဖက်ဒရယ်၏အနှစ်သာရ
အဆိုပါ Mason ဖက်ဒရယ်၏အနှစ်သာရခွာသဟာယနှင့် vertiefendem သင်္ကေတအတှေ့အကွုံ supporting, အကြီးတန်းစိတ်ကူးများ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖက်ဒရယ် Freemasons အဖွဲ့ဝင်များလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, ညီအစ်ကိုများ, သည်းခံစိတ်, ငြိမ်းချမ်းရေးမေတ္တာနှင့်လူမှုရေးတရားမျှတမှုအတွက်ရပ်တည်အဖြစ်။ အဖွဲ့များကြားတွင်ချိတ်ဆက်နေတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်လူတွေ Loge သည်ဤတန်ဖိုးများကိုလေ့ကျင့်ခန်းစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူး၏ International ၏ Freemasonry နှင့် Community နိုင်ငံများအသင်းရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်အလားတူရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူအခြားအသင်းအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့အင်္ဂါရပ်တည်ရှိသည်။
သို့သော်တဦးတည်းအဟောင်းနှင့်အစဉ်အမြဲအသစ်အမေးခွန်းတစ်ခုကို: Freemasonry ကဘာလဲ? ဖြေကြားအယူအဆ, ရပ်ရွာများနှင့်သင်္ကေတစကားရပ်၏စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖြစ် Freemasonry နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဖက်ဒရယ်မစ်လူ့စိတျကွဲပြားခြားနားသော access ကိုရွေးချယ်စရာ၏ဤမတူကွဲပြားမှု။ ဒါကြောင့်သူကိုတဦးတည်းကိုပိုမိုအခြားသူများအိပ်လူ့ဘုံထဲမှာမြင်သောသွက်ဉာဏဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းဖြင့်ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည် likes မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပြီး, တတိယနောက်ဆုံးမှာသင်္ကေတများနှင့်အစဉ်အလာကိုခံစားရသည်အဖွဲ့ချုပ်၏ဗဟို။ သို့သော် Freemasonry သာ၎င်း၏ဒြပ်စင်၏လူအပေါင်းတို့၏ဆက်စပ်မှုတွေထွက်ယူသွားတတ်၏ပြည့်စေတော်မူ၏။
Hessen ပဟေဠိအတွက် pixels ကိုကူညီတည်ထောင်သူ
Freemasons ထပ်တလဲလဲအတိအကျရှိပြီးသားအန္တရာယ်များ၏အမြင်တွင်, တက်ကြွစွာလုပ်စဉ်အမြဲ-အသစ်ကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်သဘောပေါက်ထားရပါမည်, အတန်ဖိုးများသောသူတို့သည်အမည်ခံမှသိရကြ၏။ အဆိုပါ Freemasons မူဝါဒအအစီအစဉ်များရေးဆွဲရန်မဟုတ်ပါနှင့်အုပ်စုတစ်စု၏ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်ပါဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ boxes မဟုတ်ဘဲတာဝန်ယူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေးယူသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဘုံရောင်ပြန်ဟပ်မှုကတဆင့်ကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်နေရာများဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့နေဆဲအရေးကြီးဆုံးတာဝန်ဉာဏ်အလင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အမှန်တရားများအတွက်ဘုံရှာဖွေရေးကိုရှာဖွေအားထုတ်မှုအခြိနျဇယားမှ sensitivity ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအသုံးပြုပုံစွဲကျော်လွှားအားဖြင့် Freemasons တွေ့ဆုံရန်။
တဦးတည်းနေထိုင်သောသောကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုသိနှင့်လုပ်ရပ်များကိုလမ်းပြသောအတန်ဖိုးများရှိသည်ဖို့ဆက်သွယ်ရေး: Mason တစ်ဦးချင်းစီ၏သို့မဟုတ်လူမှုရေးအုပ်စုတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဘဝအရာနှစ်ခုလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ အဆိုပါတည်းခိုကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့် shared ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလမ်းညွှန်မှုမျှော်လင့်နေသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, ညီအစ်ကိုများ, သည်းခံစိတ်, ငြိမ်းချမ်းရေးမေတ္တာနှင့်လူမှုရေးတရားမျှတမှုအလင်း၌အဖြစ်မှန်ထင်ဟပ်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Freemasons သူတို့လူမှုနိုင်ငံရေး Utopia ရေးဆွဲရာတွင်မှရှောင်ကြဉ်သောကွောငျ့လူသားတစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်, အသေးစိတ်ကြည့်ရှုဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်မသိရပါဘူးပေမယ့်။ သို့သော်လူသားနှင့်သည်းခံစိတ်၏သဘောတရားများကိုသူတို့ကိုခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလှန်ဖို့နဲ့တာဝန်သိပြုမူဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါ။
တီဗီအင်တာဗျူး DW.DE, pixels ကိုကူညီတည်ထောင်သူမှာ Oliver Bienkowski, ဂျာမန်ကောင်းစွာတီဗီ, ဘာလင်ဂျာမဏီ
မိုဃ်းတိမ်ကို: ဘန်းညစာစားပွဲတဲ့ Carl Chanson Darmstadt ဒီမိုကရေစီဂျာမန် Mason ပြတိုက်ဒေါက်တာ Concorde burnout ရာစု 300 နှစ်ပေါင်း Freemasonry အာဖဂန်နစ္စတန်အေ့ဟေပြတိုက်လှုပ်ရှားမှု Sterntaler Antoine Leiris ပြပွဲမှုတွင် bamberg Bauhaus Bayreuth အကျိုးခံစားခွင့်ဖျော်ဖြေပွဲဘာလင်အဆိုပါ Dawn ညီနောင်များ Buchloge Burkhard တနင်္ဂနွေ၏ Bihac ဘော့စနီးယား Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားက Bremen အူတုံဆင်းညီအကိုများ bielefeld Franz Reinschauer Frauenhaus Freedom Masonic Freemason ပြပွဲ Freemasonry Freemasonisches Hilfswerk ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Friederike မသေခြင်းအတွက် Furth Georg အားရွှေicဂိတ်ဂေါက်အားဖြင့် Silver Unicorn Gerd Scherm Society Glocke သို့ Alb Glocke ၏ခြေရင်းနားတွင် Alb Goethe ဂေါက်ကွင်း ဂေါက်သီးရိုက်အပြီးတွင်အဘိုးအဘိုးGroßlogentag Grandmaster အစည်းအဝေး Grandmaster Gummersbach အထက်တန်းကျောင်းခန်းမဟမ်းဘတ် Hanover Hans-Hermann Höhmann Hoya ဇာတိမြေပြတိုက် Heinrich အဲလ်ဘတ် Oppermann Helmut Reinalter ဆေးရုံ Hoya လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလူသားမျိုးနွယ်အပေါ် Hohhmann ယုံကြည်ခြင်းပွဲ၌ Isis နှင့် Osiris နှစ်သစ်ဂျွန်ဂျင်ဆင်၊ ကလေးဘုတ်အဖွဲ့ကလေးဘုတ်အဖွဲ့ကလေးများဘုတ်အဖွဲ့ klaus jürgenအစိမ်းရောင်အနုပညာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆု၊ လက်ပံပင်သုံးခုအား Leipzig Lessing လက်ဘနွန် Lichteinbringung lge logen logenbasar တည်းတည်းခိုခန်း Lothar Stitz Ludwigshafen Lübeck mannheim Masonum မက်ဂနီနစ်နော်ရီနိရုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဂနနိနိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နူဘနင်နူရိုးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗတိုင်းနိဗ္ဗာန်အားသဗ္ဗညုတ။ Pforzheim Planert နိုင်ငံရေး Potsdam pottkinder punch mile Quatuor Coronati Purifier ဘာသာတရား Reuchlin Roland Rolf Appel rotary Rumania silencer serbien sinn senseless Send အထူးပြပွဲ Freemasonry လှူဒါန်းမှုစိန့် Alban ထာဝရမီး Stad ၏ Sanssouci ၏ကြယ်ပွင့်ပွင့်လင်းနေ့တွင် Tellkamp ဘုရားကျောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း Tolerk Lyonesse ခရစ္စမတ်ဈေးသို့ Walkenried Way World Brothers Werner Brix Westphalian Peace Wetzlar Wiesbaden wildeshausen Wilhelm Busch Wilhelm zu den drei Hansa ဖို့တိုင်သုံးတိုင်WolfenbüttelWolfenbüttelအိမ်မှာဖောင်ဒေးရှင်းမှzauberflöteခေတ်ဖို့ပေါင်းစပ်သုံးမြစ်များဖို့ကြယ်သုံးပွဖို့ရွှေ Rade ဇုရ Alten Linde မှခမောက် Wilhelm ညီအစ်ကိုများယုံကြည်မှုလောကီသားတို့သည်ကွင်းဆက်မှအမှန်တရားနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးဖို့ Regnitz မှာညီအစ်ကိုများဖို့ geest Oberbergisches မှသစ္စာရှိမှုအတွက်morgenröteမှ
Freemasons အတူတူ, လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒကို run ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2nd, 2021အိုလီဗာ Bienkowski